Wednesday November 25, 2015 - 09:40:17 in Wararka by
Ragga firfircoon ee soo tebiya dagaalka Suuriya waxay sheegeen in Abuu Khaalid ku shahiiday dagaallo culus oo gobolka Idlib lagula galay ciidamada Nidaamka nuseyriga Suuriya.
Abuu Khaalid ayaa kamid ahaa dhalinyaradii soomaalida ee ka tegay wadanka Ingiriiska halkaasi oo uu kusoo koray kuna waxbartay,Allaha unaxariistee Abuu Khaalid Alsoomaali wuxuu ahaa wiil dhalinyara ah oo cibaada badan islamarkaana aad ujeclaa dadka muslimiinta.
Dagaalka Jihaadka caalamiga ah ee ka socda daafaha caalamka waxaa kaalin weyn ku leh dhalinyaro soomaali kuwaasi oo ka nafiiray wadamada reer galbeedka oo ay muddo sanada ah deganaayeen ama ay ku dhasheen.
Wadanka Suuriya wuxuu kamid yahay meelaha ugu badan ee dhalinyarada soomaalida ah ujihaad doonteen,ku dhawaad 5 sanadood ayuu dagaal xooggan ka socdaa inta badan gobollada iyo magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi.
Jihaadka Suuriya ayay mujaahidiinta ansaar iyo Muhaajiriin iska barbar dagaallamayaan,
Boqolaal dhalinyara ah soomaali ah ayaa ku shahiiday wadamada Suuriya iyo Ciraaq iyagoo ka barabar dagaalamaya jamaacaadka jihaadiga ah sida Jabhadda Al Nusrah iyo dowladda Islaamiga ah.